हङकङमा लाफा इन्भेष्टमेन्टको भेटघाट तथा अन्तरक्रिया सम्पन्न
हङकङ, ९ पुस
“एकता नै बल हो, इमान्दारिता नै धर्म हो” भन्ने मूल नारा लिएर स्थापित कम्पनी लाफा इन्भेष्टमेन्ट लिमिटेडले हङकङ भेटघाट तथा अन्तरक्रिया कार्यक्रम सम्पन्न गरेको छ ।
सामूहिक लगानीमार्फत् आर्थिक समृद्धि प्राप्तिको अभियान सुरु गरेको कम्पनीले आइतबार हङकङको जोर्डनस्थित किरात याक्थुङ चुम्लुङको भवनमा कार्यक्रम सम्पन्न गरेको हो । नेपाल, हङकङ, दक्षिण कोरिया, जापान, बेलायत, कतार, मलेसिया, संयुक्त राज्य अमेरिका, इजरायल, इटाली, बरमुडा, कुवेत, बेल्जियम, संयुक्त अरब इमिरेट्सलगायतका देशमा रहेका मगरहरूको सामूहिक लगानीमा स्थापित कम्पनीले शेयर तथा हाल सञ्चालित लाफा भिलेज परियोजनाबारे जानकारी दिने उद्देश्यले कार्यक्रमको आयोजना गरेको हो ।
“आर्थिक समृद्धि अहिलेको आवश्यकता, एकता र इमान्दारिता नै हाम्रो प्रतिबद्धता” भन्ने नाराका साथ भएको कार्यक्रममा कम्पनीका सञ्चालक समिति सदस्य एवं कानूनी मामिला प्रमुख अधिवक्ता रक्षा बहादुर रैकामगरले कम्पनीको स्थापना र उद्देश्यबारे आफ्नो प्रस्तुती राखेका थिए । त्यस्तै कम्पनीका चार्टर्ड एकाउण्टेण्ट (सीए) जनक थापामगर र कम्पनीका संस्थापक सदस्य एवं एबीसी न्यूज टेलिभिजनका प्रदेश नं. ४ का प्रादेशिक ब्यूरो प्रमुख एमबी आस्था मगरले पनि कम्पनीको आय व्यय तथा मुनाफाको अवस्था र लगानीका सम्भावनाबारे प्रस्तुती राखेका थिए ।
लाफा इन्भेष्टमेन्ट लिमिटेड हङकङका संयोजक जंग थापामगरको अध्यक्षतामा भएको कार्यक्रमको सञ्चालन कम्पनीका शेयर सदस्य वसन्त श्रीनेतमगरले गरेका थिए । सो अवसरमा हङकङ नेपाली महासंघकी अध्यक्ष रीता गुरुङ, ठकुरी समाज हङकङका अध्यक्ष ईश्वर विक्रम शाह, मगर संघ हङकङका सदस्य धर्मराज थापामगर, प्रवक्ता एवं पत्रकार तुल्सीराज रानामगर, व्यवसायी जगदीश आलेमगर, चितवन समाज हङकङका अध्यक्ष ओमराज गुरुङ, समाजसेवी केबी बुढाथोकी लगायतले आ–आफ्नो धारणा राखेका थिए । कार्यक्रममार्फत १ सय जनाभन्दा बढीले शेयर लिने प्रतिबद्धता जनाएका छन् ।
कम्पनीले हालसम्म नेपालका विभिन्न सहरहरू पोखरा, धरान, इटहरीलगायत विदेशमा कुवेत र कतारमा भेटघाट तथा अन्तरक्रिया
कार्यक्रम सम्पन्न गरिसकेको छ । निकट भविष्यमा जापान, दक्षिण कोरिया, मलेसिया, सिंगापुर लगायतका देशमा समेत कार्यक्रम गर्ने लक्ष्य राखिएको कम्पनीकी अध्यक्ष चन्द्र ज्योति आलेमगरले जानकारी दिइन ।
Last Updated on Monday, 25 December 2017 12:33
मगर संघ हङकङले माघे संक्रान्ति जनवरी १४मा धुमधामले मनाउने
मगर संघ हङकङले विगतका वर्षमा झैं माघे संक्रान्ति पर्व धुमधामले मनाउने भएको छ । यस वर्ष पनि आगामी जनवरी १४ तारिखका दिन मगर संघ हङकङले विविध सांस्कृतिक कार्यक्रमसहित माघे संक्रान्ति मनाउने तयारी गरिरहेको अध्यक्ष युगमाया रानामगरले जानकारी दिइन ।
माघे संक्रान्ति कार्यक्रममा परम्परागत मगर परिकार, खेलकुद साथै, सांस्कृतिक कार्यक्रम समेत आयोजना गरिने अध्यक्ष रानामगरले जानकारी दिए । अध्यक्ष रानाको अनुसार मंकी हिलमा हुने कार्यक्रम अघि बाजागाजा र मगर जातिको मौलिक पहिचान झल्किने सांस्कृतिक झाँकीसहित ¥याली समेत हुनेछ ।
कार्यक्रममा परम्परागत खेलकुद अन्तर्गत छेलो, डोरी तान्ने, म्यूजिक चेयर र घैंटो फुटाउने प्रतियोगिता आयोजना गरिनेछ भने नाचगानतर्फ हुर्रा, कौरा, पुख्र्यौली नाच, सालैजो, झ्याउरेलगायत रहने अध्यक्ष रानामगरले बताइन । त्यस्तै, मगर परिकारहरूमा खिचडी, तरुल, बटुक, सेल रोटी, बीबीक्यु, भुटुवालगायत रहनेछन् ।
साथै, कार्यक्रममा आकर्षक मगर पहिरनमा सहभागी एक पुरुष र एक महिलालाई विशेष पुरस्कारको व्यवस्था समेत गरिएको रानामगरले जानकारी दिइन ।
Last Updated on Sunday, 24 December 2017 16:48
२३ औं विश्व आदिवासी दिवस हङकङमा भव्यतापूर्वक मनाइयो
हङकङ, साउन २४ - नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघ हङकङको आयोजनामा २३ औं विश्व आदिवासी दिवस भव्यतापूर्वक मनाइयो । हङकङमा आयोजित कार्यक्रममा बोल्ने वक्ताहरूले विदेशी भूमिमा रहेता पनि पहिचान र संघीयताका पक्षमा जोडतोडले आवाज उठाउन जोड दिएका छन् ।
नेपालमा एकल तानाशाही शासनको अन्त्य भइ संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना भइसक्दा पनि राज्यसत्ता भने एकात्मकवादीहरूकै हातमा रहेको, उनीहरूको भनाइ थियो ।
आकर्षक झाँकी तथा सांस्कृतिक कार्यक्रमसहित मनाइएको २३ औं विश्व आदिवासी दिवसमा वक्ताहरूले एकात्मकवादी शासकहरूले पहिचान तथा संघीयताका मुद्दालाई कमजोर बनाउने षड्यन्त्र गरिरहेको चिन्ता प्रकट गर्दै आदिवासी जनजातिका हकहित, अधिकार, पहिचान, समानुपातिक उपस्थिति र समावेशिताका लागि आवाज उठाए । कार्यक्रममा वर्ष पुरुषका रुपमा आदिवासी नेता भूपेन्द्र चेम्जोङ र वर्ष महिलाका रुपमा मगर महिला संघ हङकङका अध्यक्ष युगमाया रानामगरलाई सम्मान गरिएको थियो ।
हङकङका सामाजिक अभियन्ता प्रेम गलामीमगरको प्रमुख आतिथ्यतामा याउ मा तेई कम्युनिटी हलमा भएको कार्यक्रममा नेपालबाट पहिचान र संघीयता पक्षधरका राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टीका अध्यक्ष केपी पालुङ्वा र लिम्बुवान आन्दोलनका नेता सञ्जुहाङ पालुङ्वा विशेष वक्ताका रुपमा आउनुभएको थियो । महासंघका अध्यक्ष एमबी थापामगरको अध्यक्षतामा भएको कार्यक्रममा हङकङमा रहेका विभिन्न जातीय संघसंस्थाहरूका प्रमुख तथा प्रतिनिधिहरूका समेत उपस्थिति रहेको थियो । महासंघका उपाध्यक्ष एवं कार्यक्रम संयोजक दुर्गा गुरुङ ‘मिलन’ले स्वागत मन्तव्य राख्नुभएको कार्यक्रमको सञ्चालन महासचिव हस्त मास्वाले गर्नुभएको थियो ।
Last Updated on Wednesday, 09 August 2017 16:19
हङकङका नेपाली रोलमोडल: कन्स्ट्रक्सन वर्करदेखि पिएचडीसम्म
‘दिनभर बेल्चा चलाएर लखतरान परेर आइन्थ्यो, राती नसुती नसुती पढ्थें’, ती रात सम्झँदै थापा भन्छन्, ‘अहिले पछाडि फर्केर हेर्छु, असम्भव केहि रहेनछ जस्तो लाग्छ।’
हङकङको नेपाली समाजमा लामो समयदेखि शैक्षिक क्षेत्रमा सक्रिय चुरा थापाले यहि साता हङकङ विश्वविद्यालयबाट पिएचडी डिग्री लिए। १७ अगस्टमा भएको ‘थेसिस डिफेन्स’ (परिक्षा) मा सफल भएपछि उनले डक्टरेट उपाधि हासिल गरेका हुन्। उपाधिसँगै उनले दुई वटा रेकर्ड पनि कायम गरेका छन्।
पहिलो, हङकङमा स्थायी बसोबास गरिरहेका नेपालीमध्ये थापा शिक्षा संकायबाट पिएचडी गर्ने एकमात्र नेपाली हुन्। दोश्रो, हङकङ विश्वविद्यालयको शिक्षा संकायबाट पिएचडी गर्ने थापा एकमात्र नेपाली विद्यार्थी पनि भएका छन्। यसअघि यो संकायबाट कुनै नेपालीले पिएचडी गरेको रेकर्ड छैन। उनलाई ‘हङकङका अल्पसंख्यक समुदायको शैक्षिक अवस्था’ माथि शोधपत्र गरेबापत डक्टरेट उपाधि दिइएको हो।
विभिन्न अध्ययनले हङकङका अल्पसंख्यक विशेषगरि नेपाली समुदायका विद्यार्थीहरुको शैक्षिक सूचकांक अत्यन्त कमजोर देखाउने गरेको छ। थापाले नेपाली विद्यार्थीमाथि गरेको शोधपत्रले सम्बन्धित निकायलाई हङकङेली नेपाली समुदायले भोगिरहेको शैक्षिक दुरावस्थाबारे बुझ्न र बुझाउन ठूलो मद्दत पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ। सम्बन्धित समुदायकै अध्येताले हङकङका नेपाली विद्यार्थीमाथि गरेको पहिलो प्राज्ञिक अनुसन्धान भएकोले यसले महत्व पाउने देखिएको छ।
त्यसको प्रभाव पनि देखिन शुरु भैसकेको छ। उनको शोधपत्र ‘हङकङ लिङ्ग्विस्टिक सोसाइटी’ मा आउटस्ट्याण्डिङ अवार्डका लागि नोमिनेसन हुन गैरहेको जानकारी थापासम्म आइपुगेको छ। त्यसैगरि थापालाई जनवरी महिनादेखि हङकङ विश्वविद्यालयबाट शिक्षा संकायमा एक सेमेस्टरको लागि अध्यापन गर्ने अफर समेत आएको उनी बताउँछन्।
शैक्षिक क्षेत्रका रोलमोडल
सन् १९९६ मा त्रिभुवन विश्वविद्यालय किर्तिपुरबाट विएड सकिनासाथ आइडीका कारण हङकङ छिरेका थापाले यहाँ आएपनि औसत नेपालीले जस्तो पैसा कमाउने ध्याउन्नमा आफ्नो अध्ययनलाई रोकेनन्। स्थानीय बाप्टिस्ट विश्वविद्यालयबाट अँग्रेजीमा एमएड गरेका उनले हङकङ इन्स्टिच्युट अफ एजुकेशनको शिक्षा संकायबाटै पोष्ट ग्रयाएजुसन गरे। त्यहाँ उनले सबैलाई उछिनेर पदक समेत जिते।
उत्तर गंगा मावि बुर्तिवाङ बागलुङबाट एसएलसी गरेर बुटवल बहुमुखी क्याम्पस पढ्न झरेका उनी त्यहाँबाट आइएड गरि काठमाडौँ उक्लेका थिए। त्यसपछि हङकङका लागि उडेका उनी त्यसयता यतै छन्।
अध्ययन सँगसँगै सन् २००४ देखि २०१२ सम्म यहाँको स्थानीय विद्यालयहरुमा प्राध्यापन कार्य थालेका चुरा थापाले २००७ देखि २०१२ सम्म पाक काउ कलेजमा शिक्षण पेशा गरे। उनले ऊमा इन्टरनेशनल स्कुल (२००४–२००५) र बुद्धिस्ट विङ वान (२००५–२००७) मा समेत पढाए। हङकङमै डिग्री हासिल गरेर सरकारको शिक्षा लाइसेन्स प्राप्त गर्ने थापा पहिलो नेपाली थिए।
भाषाका कारण नेपाली लगायतका एथ्निक माइनोरिटिज बच्चाहरुले हङकङका विद्यालयहरुमा राम्रो गर्न नसकिरहेको अवस्थामा अभिभावकहरु पनि यहाँको शिक्षा नीतिका कारण विद्यालय छनौटमा अन्यौलग्रस्त हुने प्रमुख समस्या मानिन्छ। त्यसका कारण अधिकांश विद्यार्थीहरुले बाटो बिराउने गरेका छन्। कतिपय कुलतमा समेत फस्ने गरेका छन्। बहुसंख्यक ड्रपआउट हुने गरेको रेकर्ड छ। त्यस्ता अनभिज्ञ अभिभावक र विद्यार्थीहरुलाई निशुल्क सल्लाह दिने एथ्निक अल्पसंख्यकबाट थापा पहिलो काउन्सिलर हुन्। त्यसैले विद्यार्थी, एकाडेमिसियन र बौद्धिकहरुबीच उनी एथ्निक मायनोरिटजका सहयोगी कहलाइन्छन्। विशेषगरि हङकङमा पढिरहेका नेपाली विद्यार्थीहरुका निम्ति रोलमाडल नै मानिन्छन्, थापा।
हिजोसम्म नेपाली बच्चाहरुको सपना अधिकांश नेपालीले गर्ने रेष्टुरेन्ट, होटल, सेक्युरिटी र कन्स्ट्रक्सनमा छिरेर उपल्लो पदमा पुग्छु भन्नेसम्म हुन्थ्यो। आज ‘म चुरा थापा सर जस्तो हुन्छु’ भन्ने विद्यार्थीहरू पनि छन्, जसले अहिले हङकङका विश्वविद्यालयमा अध्ययनसँगै सपना खोजिरहेका छन्। ति मध्ये केहि त सफलताको सोपान पनि चढिरहेका छन्। यो परिवर्तन देख्न नेपाली समाजलाई २० वर्ष भन्दा बढी कुर्नु पर्यो, हङकङमा।
मेहनत गर्नेलाई महँगा स्कुल चाहिंदैन
नेपालको सरकारी विद्यालयमा पढेर हङकङ विश्वविद्यालयजस्तो शैक्षिक संस्थाबाट पिएचडी गरी उनले फलामको च्यूरा चपाएजसरी आफुलाई सावित गरेका छन्। विश्वकै नामी विश्वविद्यालयमा दरिएको संस्थान हङकङ विश्वविद्यालयमा प्रवेश पाउनु आफैमा अहोभाग्य ठानिन्छ। त्यसमाथि पूरै छात्तवृत्तिमा पढ्न पाउनु थापा र यहाँको एथ्निक समुदायकै निम्ति ठूलो उपलब्धिको रुपमा हेरिएको छ।
भाषाभन्दा ज्ञानलाई महत्वपूर्ण ठान्ने उनले हङकङ छिरेर अँग्रेजी भाषामा यति ठूलो फड्को मारे कि अँग्रेजीभाषी विद्यार्थीहरुलाई नै उछिनेर डिस्टिङ्सन समेत गरेर देखाए। अँग्रेजी समाचारपत्र, टेलिभिजन समाचार, बच्चाहरुका निम्ति बनाइएका भाषिक पुस्तक तथा अडियो पढ्ने र सुन्ने अभ्यास गरेर भाषिक ज्ञान बढाएका उनले अरुलाई पनि त्यो उपाय बाँडिरहेका छन्। अलिकता मेहनत गरे भाषा सिक्न दुरुह नहुने उनको अनुभव छ।
हङकङको नेपाली समाजको सबैभन्दा ठूलो अभाव भनेको यहाँ शैक्षिक क्षेत्रमा दक्ष जनशक्ति नहुनु हो। त्यसैले हङकङको नेपाली समाजलाई बौद्धिक रुपमा कमजोर ठानिन्छ। यहाँ नेपालीले गर्ने बौद्धिक कर्म भद्रगोल खालको हुने गरेको छ।
हातहातमा पैसा छ तर मगजमा शिक्षा र ज्ञानको कमी हङकङेली नेपाली समाजको विशेषता मान्न सकिन्छ। थोरै अभिभावकहरु मात्र सन्ततिको शिक्षाप्रति गम्भीर रुपमा लागेका देखिन्छन्। त्यसैले हङकङको नेपाली समुदायमा थापा जस्ता थुप्रै सामाजिक कार्यकर्ताहरुको महत्व टड्कारो देखिन्छ। थापाले एक किसिमले समाजलाई मार्गनिर्देशन गरिरहेका छन्।
हङकङका बहुसंख्यक नेपाली यहाँ मरिमरि पैसा जोडिरहेका छन्। हङकङमा सुविधा हुँदाहुँदै पनि नेपालीले आफुमा भएको खुबी र योग्यतालाई निखार्न पाएका छैनन्। नेपालीले हङकङमा सहजै शैक्षिक भिसा पाउँदैनन्, हङकङमै बस्ने नेपालीले चाहीँ त्यो अवसरको फाइदा उठाउन सक्छन्। तर निकै कमले मात्र यतातिर ध्यान दिएका छन्। जीवनको मूल्यवान समय काम र मोजमस्तीमै बिताउनु हङकङका नेपालीको विशेषता नै भैदिएको छ। नयाँ पुस्ताले पनि त्यही गरिरहेका छन्, जुन पुरानो पुस्ताले वर्षौँदेखि गर्दै आए।
नेपाली श्रम र दिमाग ‘ब्लू जब’ भन्दा धेरै माथि उक्लन नसक्दा छवि पनि त्यहि बमोजिम परिभाषित भएको छ। यसबाट निस्कन निकै कममात्र प्रयास भएको छ। त्यसो गर्ने औंलामा गन्न सकिने व्यक्तिहरु मध्ये चुरा थापा पनि एक हुन्। बुझ्ने भाषामा भन्नुपर्दा ‘गरे असंभव केहि छैन’ भन्ने उदाहरण हुन्, उनी।
हङकङ आउनासाथ औसत नेपालीले जस्तै उनले पनि यहाँ निर्माणकार्यमा ७ वर्ष हड्डी घोटेका हुन्। तर फरक के थियो भने धेरै चाहीँ पैसा कमाएर मोजमस्ती गर्ने र नेपालमा घर बनाउनतिर लागे, उनी भने कमाएको पैसा पढाईमा लगाउन थाले। त्यतिमात्र होइन, सरकारले दिने शैक्षिक लोनमा उनले अध्ययनलाई अगाडि बढाए।
उनको मेहनतले फल दियो पनि। उनले राम्रो अंकका साथ डिग्री थप्दै सबैलाई चकित पारिदिए।
‘अल्छिका सय बहाना’ भने झैं हङकङेली नेपालीबीच प्रचलित एउटा टुक्का खुब प्रचलनमा छ, केहि परिहाले ‘मसँग समय छैन’ भनिदिने। बजारतन्त्रले चलाइरहेको अति व्यस्त शहर हङकङमा सद्दे मान्छे कसैलाई फुर्सद हुँदैन। तर पार्टी, विविक्यू, सिनेमा, सांगितिक कार्यक्रम सबैतिर भ्याउनेहरूकै मुखबाटै यो टुक्का बढी निस्कने गर्छ।
थापाले माथिका प्रायः सबै कर्मकान्ड भ्याएरै आफ्नो शैक्षिक यात्रालाई अगाडि बढाए। जहाँ ईच्छा त्यहाँ उपाय। यदि चाहने हो भने समय व्यवस्थापन गरि अरुले गर्न नसकेको कर्म पनि फत्ते गर्न सहिंदोरहेछ भन्ने दृष्टान्ट बने उनी।
कतिपय बेला आफ्नो राजनीतिक आस्था र सामाजिक संस्थाहरुमा निभाएका भूमिकाका कारण चुरा थापाले विरोधको सामना पनि गर्नुपर्यो, कयौं चोटी विवादमा परे। त्यसै कारण हुनसक्छ उनी त्यस्तो राजनीतिक सक्रियताबाट क्रमशः प्राज्ञिक अभ्यासतर्फ मोडिए। पछिल्लो समय जनजाति आन्दोलनमा वौद्धिक सहयोग दिएका जस्तो देखिने उनी पिएचडीकै क्रममा विश्वमा भैरहेका पहिचानको राजनीति र सिद्धान्त सम्बन्धि अध्ययनतर्फ पनि लागे। उनले कन्स्ट्रक्सन वर्करहरुका निम्ति पनि संस्थागत रुपमा काम गरिरहेका छन्।
अध्ययन सकेपछि आफ्नो वौद्धिकता स्वदेशमै लगानी गर्न आतुर थापा नेपालको शिक्षा क्षेत्रमा केहि गर्ने चाहना राख्छन्। २०१३ मा हङकङ सरकारले एउटा सम्मानको घोषणा गरेपश्चात उनले फेसबुकमा आफ्नो कामको बारेमा गरेको मुल्याङ्कन यस्तो थियो–
‘हङकङ आएर अनवरत संघर्ष र नेपाली समुदायको सेवामा आफुलाई समर्पित गरियो। हिजो जस्तै लाग्छ हङकङ आएको, तर बिभिन्न नेपाली संघसंस्था स्थापना गर्ने, नेपालीहरुलाई बिभिन्न रुपमा सचेत गराउने, हङकङ सरकारसँग नेपालीका समस्याहरुलाई उठाउने, पत्रपत्रिकाहरु र रेडियो मार्फत नेपालीको हितका लागि आवाज उठाउने, सचेत गराउने र पछिल्लो चरणमा नेपाली नानीहरुको उज्जवल भविष्यकका लागि उनीहरुलाई प्रत्यक्षरुपमा पढाउने तथा बाबुआमा र अविभावकहरुलाई शिक्षा सम्बन्धी सल्लाह सुझावहरु दिने गर्दागर्दै १७ वर्ष बितेछन्। यस्तो लाग्दैछ, नेपाल गएर देशको सेवा गर्छु भन्दाभन्दै जिन्दगी यतै बितिसकेको छ। नेपालको चिन्ता धेरै गरियो, आवश्यक थियो वा अनावश्यक सायद समयले बताउला। तर यता यो १७ वर्षको अवधिमा यहिँ संघर्ष र सेवा गरेवापत हङकङ सरकारबाट एउटा सम्मान प्राप्त भएको छ।’
३ भदौ २०७४, शनिबार . 2017-08-19 नेपालखबरडटकमा प्रकाशित । स्टोरी यहाँ छ ।
Last Updated on Monday, 13 November 2017 06:27
बरिस्ठ पत्रकार तथा सामाजिक अभियन्ता जेबी पुन मगर माथि आक्रमणको प्रयास
हङ्कङका नेपाली दादा कमल गुरुङ(स्यान्जाली कान्छा ) द्वारा ज्यान लिने धम्की ।
हङ्कङमा कार्यरत बरिस्ठ पत्रकार तथा सामाजिक अभियन्ता ,राज्यसत्ता अनलाइनका सल्लाह्कार जे बी पुन मगर माथि हङ्कङमा स्याङ्जाली कान्छाको नामले चिनिने कोमल गुरुङ थापा बाट आक्र्मण्को प्रयास भएको छ ।
हक्की पत्रकार पुन मगर माथि समाजमा गुण्डा गर्डी को नामले प्रखयात कोमल गुरुङ्ले हङ्कङ अन्तरराष्ट्रिय एअरपोर्टमा गाली गलजौ सहित भौतिक आक्रमणमा उत्रिएका थिए । घटनाबारे बुधबार साँझ नै हङकङको चिमसाचोइस्थित प्रहरी स्टेशनमा जाहेरी दिइएको छ भने प्रहरी अधिकारीले छानविन सुरु गरिने बताएका छन्। नेपाल पत्रकार संघ हङकङले बुधबार साँझ विज्ञप्ती जारी गरी विगतमा अन्य सञ्चारकर्मीमाथि आक्रमण गर्दै आएका कोमल गुरुङले बुधबार नेपालखबर हङकङका सम्पादक पुनमाथि आक्रमण गरेको भन्दै खेद प्रकट गरेको छ।
‘विगतमा अन्य सञ्चारकर्मीमाथि आक्रामक बनेका कोमल गुरुङबाट आज नेपालखबर डटकमका हङकङ सम्पादक जेवी पुन मगरमाथि ज्यानको धम्कीसहित आक्रमण भएकोमा खेद प्रकट गर्दै घोर भत्र्सना गर्दछौँ’, संघका अध्यक्ष किसन राईको विज्ञप्तीमा भनिएको छ, ‘एकै व्यक्तिबाट अनेक सञ्चारकर्मीमाथि श्रृंखलावद्ध आक्रमण हुनुले भयावह स्थिति सिर्जना भएको छ।’ विमानस्थलमा गुरुङ अश्लील शब्दसहित आक्रमणमा उत्रिएको र संघले प्राप्त गरेको भ्वाइस रेकर्ड अनुसार निम्नस्तरको भाषामा ज्यानको धम्की दिइएको विज्ञप्तीमा छ। पत्रकार संघले घटनाबारे प्रहरीमा जाहेरी गइसकेकाले आवश्यक छानविन गरी कारबाही गर्न माग गरेको छ।
‘तीन नेपाली पत्रकार र दुई नेतालाई हङकङमा मानहानी मुद्दा’ शीर्षकमा कोमल गुरुङसँग जोडिएको पुनको रिपोर्ट केही साताअघि नेपालखबरमा प्रकाशित भएदेखि नै कोमल गुरुङले आफ्ना केटाहरूमार्फत् धम्की दिन थालेका थिए। अपरिचित व्यक्तिहरूबाट धम्की आउन थालेको पुनले फेशबुक स्टाटस्मा लेखेपछि ईश्वर गुरुङको नाममा खोलिएको फेशबुक पेजबाट गाली गरियो। सम्पादक पुनले ईश्वर गुरुङसँग भेटेर छलफल गरेपछि त्यो फेशबुक पेज नक्कली भएको र कोमल गुरुङले नै त्यो पेज सञ्चालन गरेको देखियो। त्यसपछि पुनले ‘हङकङमा ईश्वर गुरुङको नक्कली फेशबुक पेजबाट यस्तो धन्दा’ शीर्षकमा हङकङको नेपाली समुदायमा चुनौती बन्दै गएको साइबर अपराधबारे ब्लग लेखे ।
नेपालमा रहँदा हिमाल खबरपत्रिकाको समाचार सम्पादक रहिसकेका पुन सात वर्षदेखि हङकङ रहेर हङ्कङका नेपाली समुदाय माझ समाजमा रहेका नकरात्मक तत्वोबारे निरन्तर खबरदारी गर्दै अाई रहेका छन । हङकङ विश्वविद्यालयमा खोज पत्रकारिता अध्ययन गरेका उनी यसअघि हङकङबाटै प्रकाशित हुने एथ्निक भ्वाइस साप्ताहिकको सम्पादक थिए भने हाल नेपालखबर हङकङको सम्पादक छन्।
नेपाल खबर ड्ट कमको सहयोगमा ।
Last Updated on Thursday, 29 June 2017 11:47
जिफान हङकङको अध्यक्षमा रोशन गुरुङ
जनमुक्ति मञ्च हंगकंगमा एम.बि. थापा